Vbookz, आईप्याड / आईफोन / आईपड को लागी उत्तम अडियो रिडर - Geofumadas
जुन, 2013 आराम / प्रेरणा
अचम्म पढ्ने अनुप्रयोगहरू हामी पुस्तकहरू, कुनै संदेहको आनन्द उठाउँदै परिवर्तन गर्दैछन्।
विशेष गरी, मैले सँधै हाइलाइटिंग र साइड नोटलाई वास्तविक पुस्तकको साथ बचत गर्न मनपराएको छ, राम्रो गद्य रुमे गर्न बिस्तारै रोकिरहेको र पढ्ने। तर यो मलाई कहिले पनि आएको थिएन कि भ्रमणमा जाँदा पढ्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Vbookz मैले पाएको सब भन्दा राम्रो हो, यदि तपाईंसँग पुस्तकको डिजिटल संस्करण छ। अब म यी सुविधाहरूमा टिप्पणी गर्दछु:
दुबै पुरुष र महिला आवाज विकल्पहरू यति स्वाभाविक लाग्दछन् कि यसले मेरो दिमागलाई उडायो। स्पेनी भाषाका अतिरिक्त १ 15 अन्य भाषाहरू छन् (अनुवादक होइन) जसमा पोर्तुगाली, जर्मन, इटालियन, फ्रान्सेली, युके अंग्रेजी र यूएस अंग्रेजी पनि पर्छन्।
त्यसपछि तपाईंसँग विकल्प छ कि पढ्ने गति परिवर्तन गर्ने विकल्प छ।
र जब तपाईं पढ्दै हुनुहुन्छ, म्याग्निङ ग्लासमा हाइलाइटिङ बढ्दै गएको छ, यद्यपि यो पनि पहेंलोमा हाइलाइट गर्न सेट गर्न सकिन्छ।
यो सराहना गर्नुपर्दछ कि यसले अनुप्रयोग बन्द गर्दा पजलाई सुरक्षित गर्दछ, ताकि हामी कहाँ जाँदैछौं भन्ने नगुमाउनुहोस्। मलाई याद छ कि सोडेल्ससँग त्यहाँ यो कमजोरी थियो, किनकि तपाईंले सामग्री छनौट गर्नुपर्‍यो, त्यसपछि प्रतिलिपि गरेर सुरु गर्नुहोस्, त्यसैले सम्पूर्ण कागजात चयन गर्दा सुरु ढिलो हुन्छ र यदि हामी पाठलाई अडियोमा रूपान्तरण गर्छौं भने पजलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै तरिका थिएन।
उहाँ अडियोमा मात्र राम्रो पाठक हुनुहुन्छ।
यो अडियो बिना पढ्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसैले तपाईंले फन्ट साइज छनौट गर्नको लागि मात्र तपाइँको औंलाहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ र पाठ पारंपरिक तरिकामा पढ्नको लागी समायोजन गरिएको छ।
तपाईंसँग म्याग्निफाइ glass गिलास प्रतिमा सहित, पाठ खोजी गर्न पनि विकल्प छ। फन्ट ढाँचा एन्टी डिस्लेक्सिया हो ... रमाईलो।
PDF बाट पढ्नुहोस्
यो उत्तम हो। Sodels को नुकसान थियो कि यो एक शब्द वा txt संस्करण आवश्यक छ। र जे होस् यो रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, धेरै केसमा पृष्ठ संख्या, फुटर वा हेडर पढ्न कष्टकर थियो। Vbookz केवल पाठ मात्र पढ्दछ, प्राकृतिक रूपमा।
शब्द फाइलको अवस्थामा, केवल pdf मा बदल्नुहोस्, जुन पाना वा शब्दसँग सजिलैसँग गर्न सकिन्छ।
यसले निन्द्रा मोडलाई समर्थन गर्दछ, त्यसैले विशेष रूपमा अनुप्रयोग हुनु आवश्यक छैन र यो पृष्ठभूमिमा चल्छ। यसको मतलब यो हो कि हामी पढ्दा अन्य अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्न सक्दछौं, वा यसलाई बिना रोकिएको छ। यदि अर्को सूचना प्रकारको अडियो लिईन्छ भने पनि, यो रोकिदैन; यदि हामी संगीत वा सतत अडियो सक्रिय, यो पज गर्दछ।
तपाईं पठनको बेला पृष्ठभूमि संगीत पनि पाउन सक्नुहुन्छ, यसैले मेरो एक सल्लाहकारको त्यो अवधारणा पूरा गर्ने जसले पढाइमा अधिक लाभ प्राप्त गर्न उपचारको रूपमा सफ्ट संगीतको सिफारिश गर्‍यो। र चाखलाग्दो विवरण, फेसबुक मार्फत वाक्यांशहरू साझेदारी गर्न सम्भव छ।
मैले दुई दिनको यात्रामा रमाईलो लिएँ, जबकि ड्राइभिंग गर्दा मैले गरसिया मार्क्वेजले सम्पूर्ण "लि to्ग टु यो भन्न" पढ्न सकेको छु। मलाई याद छ कि मैले यो किताब किनेको छु तर पूर्ण रूपमा कहिले पढिएको छैन, मैले भर्खरै एउटा pdf डाउनलोड गरें र यही हो ... जान पढ्नुहोस्। यद्यपि यसले पुस्तकालयबाट नि: शुल्क पुस्तकहरू डाउनलोड गर्न मेरो ध्यान खिचेको छ Gutemberg.
अफसोस कि यसले DRMed वा ePub ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्दैन, जसले किन्डल फाइलहरू पढ्न असम्भव बनाउँदछ, हुनसक्छ पछि। साथै त्यहाँ धेरै अनुप्रयोगहरू छन् जुन तपाईंलाई रूपान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ।
यहाँबाट तिनीहरूले गर्न सक्छन् एप डाउनलोड गर्नुहोस्.
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो शहरी क्याडस्ट्रल मूल्याra्कनको लागि म्यानुअल
अर्को पोस्ट Supergo बाट3समाचारहरूअर्को »
२ जवाफ "Vbookz, आईप्याड / आईफोन / आईपड को लागी उत्तम अडियो रिडर"
स्पेन बाट स्पेनिश
बोली स्पेन स्पेनबाट स्पेनिस हो? ल्याटिनो?